हामी त लगाए सकिन्छ भनेर बुझ्न
कृषि शब्द "परिक्रमा" सामूहिक र राज्य फारमहरु को विशाल क्षेत्रमा मामलामा, तर पनि एउटा सानो क्षेत्र अवैतनिक grower मा मात्र होइन सान्दर्भिक छ। सादा मानव भाषामा, यो तपाईं त लगाए सकिन्छ कि एक अनुक्रम पालना गर्न आवश्यक अर्थ, र त्यो खराब छ। तथ्यलाई प्रत्येक बोट केही ट्रेस तत्व भूमि देखि खपत, र एक ठाउँमा एउटै संस्कृति को खेती निकै माटो depletes छ। तिनीहरूले माटो मा वर्ष पछि वर्ष विद्यमान यदि बोट रोगहरु विरुद्ध लड्न, धेरै गाह्रो छ भन्ने तथ्यलाई उल्लेख गरिएको छैन।
रोग र सुरु साथ
तिनीहरूले "प्रत्येक तरकारी एक समय।" भन्न - यसको टुटफुटकर्ता प्रत्येक तरकारी: यो बाटो paraphrased गर्न सकिन्छ। जीवाणु, यस्तो गाजर र turnips रूपमा कीरा र आफ्नो लार्वा क्षेत्रमा संकलित, आफ्नो मनपर्ने तरकारी संग "खुवाउने", र दोस्रो सिजन नै बिरूवा वा अर्को एउटै ओछ्यानमा मा भूमि लागि एक विशाल गल्ती हुनेछ, तर एउटै प्रजाति। यहाँ कुनै रसायन छैन मद्दत गर्नेछ। यो phytophthora भन्दा बढि pernicious र ineradicable blight नाम गर्न कठिन छ। यो केवल दाखको बोट मा क्रप ruining छैन, तर धेरै वर्ष को लागि माटो भण्डारण गरिएको छ। किन तपाईं नै संस्कृति, यो महामारीले, वा अन्य बाली उजागर, जो पनि blight ग्रस्त एउटै ठाउँमा धारण गर्न सक्ने छ। एक प्रशंसक भन्दा तरकारी: त्यसपछि लगाए सकिन्छ कि एक विषय अध्ययन, यो खातामा यस विशेष पक्ष लिन आवश्यक छ। त्यसैले, लेट blight: यो सबै भन्दा कडा टमाटर, आलु, बैगुन, खुर्सानी संक्रमित। यो यी तरकारी को कुनै पनि अन्य पछि रोपण लागि उपयुक्त छैनन् भन्ने हो। विशेष गरी माथि उल्लिखित बिरामी संक्रमण को पूर्ववर्ती भने। खैर, रोग को अवतरण ठाउँहरू प्राप्त तपाईँ कुनै नयाँ ठाउँमा संक्रमित बीउ वा जरा राख्न भने छुटकारा छैन परिवर्तन - त्यसैले तपाईं बस तरकारी बगैचा वरिपरि रोग फैलाउन सक्छ।
त्यसपछि के लगाए गर्न सकिन्छ?
हामी पहिले देखि नै तरकारी, लेट blight विषय, उदाहरणका लागि, र तिनीहरूले alternated गर्न सकिन्छ बारेमा कुरा सुरु गरेपछि। आलु र टमाटर सुरक्षित मटर र सिमी लगाए सकिन्छ पछि, यो माटो लागि धेरै लाभदायक हुनेछ। राम्रो तिनीहरूलाई र बन्दागोभी, बीट र गाजर पछि जानुहोस्। जो टमाटर, आलु र eggplants सर्वश्रेष्ठ predecessors नै सिमी, बन्दागोभी, मकै, खीरे, प्याज र जडीबुटी छन् ती। लसुन सेम र स्क्वास बिरुवाहरु पछि राम्रो महसुस गरिएको छ। तर लसुन पछि लगाए सकिन्छ - अर्को विषय हो। प्याज र लसुन - एक प्रजाति को संस्कृति र एक द्वारा तिनीहरूलाई राख्नु, वर्ष पछि एउटै ठाउँमा वर्षमा लगाए रूपमा, सक्दैन। तिनीहरूले नै रोगहरु र किरा छ, र यो गम्भीर लग्नु गर्नुपर्छ उपचार गर्न। हो, र तिनीहरूले नै कुरा माटो बाट, यो depleting र नियमित fertilizing आवश्यकता उपभोग। धेरै प्याज र लसुन पछि के लगाए सकिन्छ सूची अधिक। जाडो र वार्षिक जडीबुटी, सिमी, खीरे, प्रारम्भिक आलु सबै प्रकारका - तिनीहरू सबै पूर्व प्याज र लसुन बेड मा राम्रो भावना गरिरहेका छन्। प्याज मुला लगाए सकिन्छ पछि, त्यसपछि त्यहाँ माटो किरा देखि उनको बचत गर्न आशा छ। खीरे, बन्दागोभी र टमाटर संग alternated गर्न सकिन्छ साथै बीट र turnips संग रूपमा।
र यदि तपाईं गर्न सक्छन्?
को खेत मा एक तरकारी बगैचा लागि भूमि धेरै सानो छ भने, त्यसपछि लगाए सकिन्छ के को त्यसपछि प्रश्न, विशेष गरी छैन खाली गर्नेछ। उदाहरणका लागि, माली एक आलु मा बढ्दै छ भने, यसलाई क्षेत्र को सबै भन्दा हुनेछ, र अर्को स्थानमा सफल असम्भाव्य छ सार्न। टमाटर, खीरे समान। त्यहाँ एउटा मात्र बाटो बाहिर छ: पटक उपज त्यागी र माथि देशमा एक ब्रेक को हल्का बाली दिन र उनको धारण गर्न, केही तरकारी पूर्णतया दिन मा - साग, सिमी, प्याज, लसुन। र जैविक मल र शीर्ष लाउने बारे मा भूल छैन - तिनीहरूले माटो अद्यावधिक एक निश्चित डिग्री अनुमति दिन्छ।
मरिच लागि हरितगृह मा चासो। रोपण गठन, pollination
1 हा देखि आलु को उपज। आलु उत्पादन प्रविधि। खेती (फोटो)
बेलारुस मा नाशपाती को सबै भन्दा राम्रो प्रजातिहरू: समीक्षा, कृषि, regionalization
मा भरने प्रश्न: cantaloupe - एक बेरी वा फल हो?
एक सानो अब कसरी सुरक्षित गर्न सिक्न एक फूलदान मा गुलाब
र बच्चा बेबी मनिटर निगरानी - युवा आमा को एक अपरिहार्य उपकरण
"संकेत" - समीक्षा। "संकेत": सारांश, अभिनेता
विभिन्न अवस्थामा लागि छनौट हेडफोन
विधा कार्य - यो के हो? कार्य को विधा मा सबै भन्दा राम्रो फिलिमहरु को सूची
दबाइ 'Cyclodynon': प्रयोगको लागि निर्देशन
ठमेलका लागि घर भित्र एक्युलिप्टप्लेसको साथ इन्सुलेशन
संरचना र समीक्षा: इलेक्ट्रोनिक चुरोट Dekang लागि तरल पदार्थ
होटल Ostashkov: त्यहाँ कसरी प्राप्त गर्ने? समीक्षा
व्यक्तिगत बन्द क्रिया महिलासँगविभिन्नसंयोजनहरूहुन्छन् 1 र 2: हिज्जे
कार्यक्रम "अटोक्याड": स्थापना कसरी, अनुप्रयोग विवरण
घरमा दाँतको दुखाइको soothe कसरी सुझावहरू